अय्यूब र भजनसङ्ग्रह
पुरानो नियमलाई सरसरती हेर्ने क्रममा अब हामी इतिहासका पुस्तकहरूलाई छाडेर पद्य पुस्तकहरूलाई हेर्नेछौं। पुरानो नियममा ६ ओटा पद्य पुस्तकहरू भेटिन्छन्: अय्यूब, भजनसङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक, श्रेष्ठगीत र विलाप। यस पाठमा हामी पहिलो दुई पद्य पुस्तकहरूलाई अध्ययन गर्नेछौं: अय्यूब र भजनसङ्ग्रह।
पुरानो नियमका कविता अर्थात् हिब्रू कविता (पद्य) नेपाली कविताभन्दा अलिक फरक छन्। नेपाली कविता वा गीतहरूमा सामान्यतया अनुप्रासको प्रयोग हुन्छ, जस्तै:
यस किसिमका पद्य ध्वनिको समानतामा अर्थात् उस्तै सुनिने अर्थात् अनुप्रासयुक्त शब्दमा आधारित हुन्छन्। हिब्रू पद्य ध्वनिको समानतामा खासै आधारित नभई विचारको समानतामा आधारित हुन्छन्। हिब्रू पद्यको रचनामा दुइटा विचारलाई एउटा निश्चित प्रकारले सँगै राखिएको हुन्छ। यसलाई तुलना अथवा समानन्तरता (अङ्ग्रेजीमा "प्यारालालिज्म", parallelism) भनिन्छ:
समानन्तरता भनेको के हो?
"समानन्तरता" भन्ने कुरा बुझ्नलाई दुई समानन्तर रेखाको कल्पना गर्नुहोस्। रेलका लिग समानन्तर हुन्छन्। त्यसका दुई लिग सँगसँगै हुन्छन् र ती समान दुरीमा रहेर अगाडि बढ्दछन्। पुरानो नियमका पद्य पुस्तकहरूमा तीन किसिमका समानन्तरताहरूको प्रयोग भएको भेटिन्छ। तिनलाई एक-एक गरी हामी विचार गरौँ!
जुन पद्यमा विचार दोहोरिएको हुन्छ त्यसलाई सामानर्थ समानन्तरता भनिन्छ। यसअन्तर्गत कुनै एउटा कुरालाई व्यक्त गरिएको लगत्तैपछि उक्त कुरालाई फेरि बेग्लै शब्दमा व्यक्त गरिएको हुन्छ। जस्तै, अय्यूब ४:१७ मा हेरौं:
के मरणशील मानिस परमेश्वरभन्दा बढी धर्मी ठहर्न सक्छ?
के कुनै प्राणी आफ्ना सृष्टिकर्ताभन्दा पवित्र हुन सक्छ?
दोस्रो पङ्‍‍‍क्तिले पहिलो पङ्‍‍‍क्तिकै विचारलाई दोहोर्‍याएको छ। एउटै विचार (माथिको उदाहरणमा चाहिँ एउटै प्रश्‍न) लाई दोहोर्‍याइएको छ, केवल बेग्लै शब्दमा। दोस्रो पङ्‍‍‍क्तिलाई पहिलो पङ्‍‍‍क्तिको प्रतिध्वनि भन्न सकिन्छ।
रेलको लिगसित तुलना गर्ने हो भने, ती विचार एकै दिशामा दगुरिरहेका रेलका लिगजस्तै छन्:
दुवै लिगले खास एउटै कुरा बताउँदैछन्, भिन्‍नता यति छ कि तिनीहरूले बेग्लाबेग्लै शब्द प्रयोग गर्दैछन्।
यस किसिमको समानन्तरतामा विचारलाई दाँज्ने वा भिन्नता देखाउने काम गरिन्छ।एउटा विचार व्यक्त गरिएपछि त्यसको विपरित विचार व्यक्त गरिएको हुन्छ। जस्तै हितोपदेश १२:२ मा यो पाइन्छ:
भलो मानिसले परमप्रभुबाट कृपा पाउँछ;
तर खराब युक्ति रच्ने मान्छेलाई उहाँले दोषी ठहराउनुहुनेछ।
यहाँ हामी देख्छौं, दोस्रो पङ्‍‍‍क्तिले पहिलो पङ्‍‍‍क्तिको भन्दा फरक विचार व्यक्त गरेको छ। पहिलो पँक्तिले एक असल मानिसको कुरा गर्दै छ भने दोस्रो पङ्‍‍‍क्तिले एक दुष्ट (धूर्त) मानिसको। असल मानिस आशिषित हुनेछ तर दुष्ट मानिस श्रापित (दोषी) ठहरिनेछ! दोस्रो पङ्‍‍‍क्तिले फरक अर्थात् विपरित विचार व्यक्त गरेको छ।
रेलको लिगसित तुलना गर्ने हो भने, ती विचार विपरित दिशामा दगुरिरहेका रेलका लिगजस्तै छन्:
यस्ता समानन्तरतामा पदको दोस्रो भागले पहिलो भागको विचारलाई अझ विकास गरी लैजान्छ। पहिले एउटा विचार व्यक्त गरिन्छ (पदको पहिलो भागमा) अनि त्यसपछि दोस्रो भागमा उक्त विचारलाई थप विवरणसहित व्याख्य गरिन्छ अथवा उक्त विचारसित सम्बन्ध राख्ने कुनै नौलो कुरा समेत बताइन्छ। जस्तै, हितोपदेश १६:५ मा हेरौं:
जसको हृदयमा घमन्ड छ, त्यस्तो हरेक व्यक्ति परमप्रभुका निम्ति घृणित छ;
निश्‍चय नै त्यो दण्ड नपाई छोडिनेछैन।
पदको पहिलो भागले भन्छ, परमेश्वरले घमन्डलाई घृणा गर्नुहुन्छ (परमेश्वर घमन्डको पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ)। पदको दोस्रो भागले चाहिँ घमन्डीहरूकै बारेमा थप कुरा बताउँछ। घमन्डीहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुने मात्र नभएर उनीहरूलाई उहाँले दण्ड समेत दिनुहुनेछ!
रेलको लिगसित तुलना गर्ने हो भने, यसलाई रेलका दुई लिगहरूको रूपमा विचार गर्न सक्छौं जसमा एउटाचाहिंले अर्को लिगको विचारलाई अझ पर पुर्‍याएको कल्पना गर्न सक्छौं:
समानन्तरहरू छुट्टयाउन सक्नुहुन्छ?
निम्न पदहरूलाई पढ्नुहोस् र ती सामानर्थ समानन्तरता हुन् कि विरोधालङ्कार समानन्तरता हुन् छुट्टयाउनुहोस्:
अय्यूब - धर्मीजनलाई कष्ट किन हुन्छ?
ज्यादै प्राचीन तर ज्यादै समयानुकूल पुस्तक!
अय्यूबको पुस्तक सम्भवतः बाइबलकै सबभन्दा प्राचीन पुस्तक हो। यो पुस्तक उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्मका मोशाका पाँच पुस्तकहरू लेखिनुभन्दा धेरै अगाडि लेखिएको हो। कतिको विचारमा अय्यूब अब्राहामसित समकालीन व्यक्ति थिए। यसर्थ, अय्यूबको पुस्तक पढ्दा हामी ४००० वर्ष अगाडिका घटना पढिरहेका हुन्छौं! यति प्राचीन पुस्तक भए तापनि अय्यूबको पुस्तकले वर्तमान मानिसका लागि ताजा सन्देश बोकेको छ!
अय्यूब को थिए?
कतिको विचारमा अय्यूब केवल एक काल्पनिक व्यक्ति मात्र हुन्। उनीहरूको धारणामा अय्यूबको पुस्तक एक अय्यूब नाम गरेका मान्छेको बारेमा एउटा रोचक कथा मात्रै हो तर यो इतिहासकै एकजना वास्तविक व्यक्तिको वास्तविक वृत्तान्त हो भनी उनीहरू विश्वास गर्दैनन्।
अय्यूबको पुस्तक पढ्न थाल्नुअघि अय्यूब मानदेव र पृथ्वीनारायण शाहजस्तै एक वास्तविक व्यक्ति थिए भनी बुझ्नु आवश्यक छ।
इजिकिएल १४;१४ र १४;२० पढ्नुहोस्। यी शब्द कसका हुन् (पद १४)? _______________। परमेश्वरले उल्लेख गर्नुभएका तीनजनाका व्यक्तिका नाम के-के हुन्?१) ___________ २) ______________ ३) _____________। के नूह इतिहासका एक वास्तविक व्यक्ति थिए? ___________ (टिप्पणी, हेर्नू: मत्ती २४;३७-३८; येशूले नूह इतिहासका एक वास्तविक व्यक्ति थिए भनी विश्वास गर्नुहुन्थ्यो!)। के दनिएल इतिहासका एक वास्तविक व्यक्ति थिए (मत्ती २४:१५ मा येशूको भनाइ पढ्नुहोस्)? ____________। तसर्थ, अय्यूब, दनिएल र नूह जत्तिकै वास्तविक थिए! उनी एक वास्तविक मानिस थिए जो पृथ्वीमा बस्दथे! याकूब अध्याय ५ मा अय्यूब उल्लेख गरिएको पद भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? पद॒______। अय्यूब वास्तवमै जिउने एक वास्तविक मानिस थिए भनी याकूब जान्दथे! यस मानिसलाई के कस्ता घटना भए अब हामी हेर्नेछौं:
आफ्नो विश्वासबाहेक सर्वस्व गुमाएका व्यक्ति!
अय्यूबलाई के भएको थियो भनेर जान्न केवल तीनओटा अध्याय पढे पुग्छ। पहिला दुई अध्यायले अय्यूबलाई आइपरेका सब कुरा बताउँछन् अनि अन्तिम अध्याय (अध्याय ४२) ले यो अचम्मको साँचो वृत्तान्तको अन्त कसरी भएको थियो भनेर बताउँदछ! बाँकी ३९ अध्यायहरूले अय्यूबको पुस्तकको मूल प्रश्नको जवाफ दिन खोज्दछ: धर्मीजनलाई किन कष्ट हुन्छ?
पुस्तकको प्रारम्भमा अय्यूबको परिचय दिइएको छ। उनी कस्ता मानिस थिए (अय्यूब १:१)?_____________________
अध्याय १ को छैटौं पदमा परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गमा भएको कुराकानीको एक झलक दिनुभएको छ। हामी परमेश्वर र शैतानका बीचको वार्तालाई सुन्न सक्छौं! परमेश्वरले उसलाई दिनुभएका सबै आशिषको कारण अय्यूबले परमेश्वरको सेवा गरेका हुन् भन्ने आरोप शैतानको थियो (अय्यूब १:९-१०)। ती सबै आशिष उनीबाट लगिएको खण्डमा अय्यूबले के गर्नेछ भनेर शैतानले दाबी गरे (अय्यूब १:११)? ______________ ____________________________________
तब परमप्रभुले "त्यसकहाँ जे-जति छन्, सबै" शैतानको हातमा सुम्पिदिनुभयो (अय्यूब १:११) तर अय्यूबलाई खराबी गर्न वा छुन भने अनुमति दिनुभएन (अय्यूब १:१२)।
शैतानको शक्ति ठूलै छ तर परमेश्वरको अनुमतिबिना उसले केही पनि गर्न सक्दैन। अय्यूब १:१३-१९ मा हामी शैतानले ल्याएका डरलाग्दा कुराका बारेमा पढ्छौं। यी पदअनुसार अय्यूबले गुमाएका केही कुराहरू के-के थिए?
यी कुराहरू उसबाट लगिएको खण्डमा अय्यूबले परमेश्वरलाई सराप्नेछन् भन्ने शैतानको दाबी थियो। के शैतानको दाबी सत्य ठहरियो (अय्यूब १:२०-२१)? ____________। के अय्यूबले परमेश्वरका विरुद्ध पाप गरे (अय्यूब १:२२)? _____________। परमेश्वर र शैतानबीच भएको वार्ताको बारेमा के अय्यूबलाई थाहा थियो? ___________। जहाँसम्म अय्यूबलाई थाहा थियो, आफूसँग भएका सब लैजाने व्यक्ति परमेश्वर स्वयम् हुनुहुन्थ्यो (अय्यूब १:२१ - "परमप्रभुले लानुभयो")! अय्यूबले ठीकै भनेका हुन्! शैतानले यी सबै काम गरे तापनि परमेश्वले नै गर्नुभएको हो भनेर भन्न सकिन्छ! सबै कुरामाथि परमेश्वरको नियन्त्रण छ र शैतानले परमेश्वरको अनुमतिबिना केही गर्न सक्नेथिएनन्।
शैतानले अय्यूबलाई छुन्छ
अध्याय २ पढ्न थाल्दा फेरि हामी परमेश्वर र शैतानबीचको वार्तालाई सुन्न पाउँछौं। यस पटक अय्यूबको अग्नि परीक्षा गर्न उनको शरीरलाई कष्ट दिनुपर्छ भन्ने विचार शैतानले प्रस्तुत गर्दछ। आफ्नै शरीरमा कष्ट र पीडा भोग्नुपरेपछि अय्यूबले के गर्नेछ भन्ने शैतानको दाबी थियो (अय्यूब २:५)? __________ ____________________________________________
के परमेश्वरले शैतानलाई अय्यूबको शरीरलाई प्रहार गर्ने अनुमति दिनुभयो (अय्यूब २:६)? ____________। के परमेश्वरले शैतानलाई अय्यूबको जीवनलाई अन्त गर्ने अनुमति दिनुभयो (अय्यूब २:६)? ________________
शैतान गयो र उसले आफ्नो काम गर्‍यो (अय्यूब २:७-८)! परमेश्वर र शैतानबीचको वार्ताको बारेमा के अय्यूबलाई जानकारी थियो? __________। आफूले यस्ता पीडादायी खटिराको कष्ट भोग्नुपरेको खास कारण के थियो भनी के अय्यूब जान्दथे? ________________
शैतानले सोचेको थियो, अय्यूबले परमेश्वरलाई सराप्नेछ। के शैतान सत्य ठहरियो (अय्यूब २:९-१०)? ____________। के अय्यूबले आफ्नो मुखले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्‍यो (अय्यूब २:१०)? ________________
परमेश्वरले शैतानलाई आफ्नो कुरा साबित गराउनुभयो अनि सबै स्वर्गदूतहरूलाई शैतान गलत छन् भनी प्रमाणित गराउनुभयो!
अय्यूबका तीन मित्रहरू
अध्याय २ को अन्ततिर अय्यूबका तीन मित्रहरू आइपुग्छन् (पद ११-१३)। यी तीन मित्रले अय्यूबलाई सान्त्वना दिने प्रयास गरे तर उनीहरू सफल भएनन्! उनीहरूप्रतिको आफ्नो धारणालाई आय्यूबले यसरी व्यक्त गरे: "तपाईहरू त ________ ________________ का ____________________ दिनेहरू मात्र हुनुहुन्छ" (अय्यूब १६:२)! यी मानिसहरूले अय्यूबसित ठीक कुरा गरेनन्! उनीहरूको भनाइ यस प्रकार थियो: "अय्यूब, तिमीलाई परमेश्वरको दण्ड आइपरेको हो! यो कष्ट आइपर्नुको कारण तिम्रो पाप हो! कष्ट पापकै उपज हो! तिम्रो कष्टले तिमी दुष्ट छौ भन्ने देखाइरहेको छ!"
यसले हामीलाई फेरि अय्यूबको पुस्तकको मूल प्रश्नको बारेमा सोच्न लगाउँछ: "धर्मीजनलाई कष्ट हुँदैन! दुष्टलाई मात्र कष्ट हुन्छ। अय्युबलाई कष्ट छ, तसर्थ ऊ दोषी हुनैपर्छ!"
यस समस्यालाई बुझ्न खोज्ने क्रममा हामीले याद राख्नुपर्ने त्यहाँ केही कुराहरू छन्:
कहिलेकाहीँ दुष्टलाई आफ्ना पापका निम्ति कष्ट हुन्छ। जस्तै, कोरिन्थका कतिपय विश्वासीहरू पापकै कारण रोगी भए (१ कोरिन्थी ११:२९-३१); हनानिया र सफिरा दुवै उनीहरूको पापकै कारण मरे (प्रेरित अध्याय ५)।
आउनेवाला जीवनमा दुष्टहरूले अर्थात् मुक्ति नपाएकाहरूले आफ्ना पापका दण्ड भोग्नेछन्।
यस जीवनमा कहिलेकाहीँ दुष्टको फलिफाप भएको हुन्छ र धर्मीजनले कष्ट भोग्नुपरेको हुन्छ (भजनसङ्ग्रह ७३:३,१२,१३,१४)।
अय्यूब एक सिद्ध र सोझा जीवन बिताउने, खराबीबाट अलग रहने व्यक्ति थिए। हामीलाई यो कसरी थाहा छ? परमेश्वर आफैले यो कुरा बताउनुभएको छ (अय्यूब १:१ र इजिकिएल १४:१४,२०)!
अय्यूबको कष्टको खास कारण
अय्यूबको कष्टको कारण हामीलाई अगाडिबाटै थाहा भइसेको छ: शैतानलाई एउटा कुरा साबित गराउन परमेश्वरले उक्त कष्ट आइपर्न दिनुभएको हो! तर याद गरौं, अय्यूबलाई यसको कुनै जानकारी थिएन! परमेश्वरले त यी सारा कष्टद्वारा अय्यूबलाई केही एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो (अय्यूब २३:१०)।
अय्यूबको पुस्तकको आखिरी अध्यायहरूमा अय्यूबसित परमेश्वर स्वयम् बोल्नुहुन्छ! परमेश्वरले अय्यूबको एउटा अचम्मको जाँच अथवा परीक्षा लिनुभयो! उहाँले अय्यूबलाई एकपछि अर्को प्रश्न सोध्नुभयो! अय्यूब अध्याय ३८-४१ मा हेर्नुहोस्। परमेश्वरले अय्यूबलाई कतिओटा प्रश्नहरू सोध्नुभयो? ______________
अय्यूबले यी प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन्! जाँचमा उनी फेल भए! यी सबै प्रश्नले परमेश्वर वास्तवमा कति महान्, कति सामर्थी र कति बुद्धिमानी हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछन्! अय्यूबले उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर महसुस गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो! अय्यूब जाँचमा फेल भए तापनि उनले बुझ्नुपर्ने कुरा बुझे!
चाबी पद अय्यूबको पुस्तकको अन्ततिर भेटिन्छ, अय्यूब ४२:५ - "मेरा कानहरूले तपाईका बारेमा सुनेका मात्र थिए, तर अब ता म तपाईंलाई आफ्नै आँखाले _____________"। अय्यूबलाई एउटा अचम्मको अनुभव भयो! उनले अन्तमा परमेश्वरको एक झलक पाए; उनले परमेश्वरलाई उहाँ वास्तवमा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर देख्न पाए! परमेश्वर कति महान् हुनुहुन्छ भनेर उनले अन्तमा देखे।
आखिरमा अय्यूबले यो महसुस गरे: "परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर मैले बल्ल बुझें! म किन कष्ट भोग्दैछु म जान्दिनँ तर यो म जान्दछु कि उहाँ जे गर्दैहुनुहुन्छ परमेश्वर आफै जान्नुहुन्छ र जे सर्वोत्तम छ त्यो परमेश्वर जान्नुहुन्छ। मैले सबै कुरा बुझ्नैपर्छ भन्ने छैन! मेरा परमेश्वरले सब बुझ्नुहुन्छ!" उनका कष्टले अय्यूबलाई परमेश्वरलाई साँचो गरी चिन्न मद्दत गर्‍यो!
तपाईंको जीवनमा पनि तपाईँले बुझ्न नसक्ने कुनै कुराहरू भइरहेका होलान्। तपाईंलाई त्यस्ता कुराहरू भइरहेका होलान् जो तपाईं बुझ्नुहुन्न। सायद तपाईं आत्तिँदै भन्नुहोला, "मलाई किन यस्तो भइरहेछ?" जीवनमा कतिपय कुराहरू ज्यादै कठीन हुन्छन् अनि ती किन हुन्छन् भनेर जान्ने हामीलाई इच्छा हुन्छ। अय्यूबको पुस्तकबाट सिकेको पाठलाई याद गरौं: "किन, म जान्दिनँ तर परमेश्वर जान्नुहुन्छ। उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर जान्नुहुन्छ अनि मेरो भलाइको निम्ति जुन कुरा सर्वोत्तम छ त्यो परमेश्वर जान्नुहुन्छ! मैले सबै कुरा बुझ्नैपर्छ भन्ने छैन। मेरा परमेश्वर सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ अनि म उहाँमाथि भरोसा राख्नेछु।"
अय्यूबको पुस्तकको अन्त राम्रो छ!परमेश्वरले अय्यूबलाई कसरी आशिष दिनुभयो (अय्यूब ४२:१०-१७)? ____________ ___________________________________________________
नयाँ नियममा आएर हामी वास्तवमै एकमात्र निर्दोष र साँच्चीकै धर्मी जनको कष्ट र मृत्युको बारेमा पढ्दछौं। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, प्रभु येशू ख्रीष्ट! धर्मी ख्रीष्टले किन दुःख भोग्नुभयो? यसको जवाफ १ पत्रुस ३:१८ मा छ, ___________________________________________________
भजनसङ्ग्रह - हिब्रूहरूको उपासनाको पुस्तक तथा गीतमाला
भजनसङ्ग्रह बाइबलकै सर्वप्रिय खण्डहरूमध्येमा पर्दछ। भजनसङ्ग्रह हिब्रूहरूको प्रार्थना र प्रशंसाको पुस्तक हो। भजनसङ्ग्रहमा हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना र प्रशंसा गरिरहेका र अरूहरूलाई परमेश्वरको महानताको वर्णन गरिरहेका मानिसका अभिव्यक्तिहरू पढ्दछौं!
भजनसङ्ग्रहको पुस्तक भेट्टाउन सजिलो छ। बाइबललाई बीचतिर पल्टाउनुहोस् अनि तपाईं सम्भवतः भजनसङ्ग्रहको कुनै भागमा (वा त्यसको नजिकै) पुग्नुहुनेछ। प्रायः भजनहरू दाऊदद्वारा लेखिएका हुन् जसलाई "इस्राएलका _________________ गाउने" (अक्षरश रूपान्तर, "मीठो गीतकार")। "भजन" (हिब्रू "मिज्मोर") शब्दको अर्थ हुन्छ, "बाजासहित गाइने कविता"। भजनहरू, गाउनका लागि रचिएका गीतहरू थिए! दाऊद एक निपुण गीतकार थिए। उनले वीणा बाजाका साथ यी गीतहरू गाउने गर्थे (१ शमूएल १६:१६,१८,२३)। अधिकांश भजनहरू दाऊदले लेखेका हुन् तर गीतकार उनी मात्र थिएनन्। भजनसङ्ग्रह ९० कसले लेखेका हुन् (आफ्नो बाइबलमा "भजनसङ्ग्रह ९०" को मुनि हेर्नुहोस्)? ____________। भजनसङ्ग्रह ७२ कसले लेखेका हुन्? _______________। भजनसङ्ग्रह ७३? ________________
भजनसङ्ग्रहमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण पदहरू छन् त्यसैले एउटै चाबी पद छनोट गर्न गाह्रै पर्छ (तपाईंले सायद प्रत्येक भजनैपिच्छे एउटा-एउटा चाबी पद भेट्टाउन सक्नुहुन्छ)। तर भजनसङ्ग्रहको विषय प्रशंसा भएको हुनाले भजनसङ्ग्रहको आखिरी पद (भजनसङ्ग्रह १५०:६) लाई चाबी पदको रूपमा छनोट गर्नु सुहाउँदो होला: "सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। हल्लेलुयाह!" आफ्ना सृष्टिले उहाँको प्रशंसा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ! भजनसङ्ग्रह प्रशंसा (अर्थात् उहाँलाई उहाँको महानताको श्रेय दिने काम र अरूहरूलाई उहाँको महानताको वर्णन गर्ने काम!) ले भरपूर छ।
सबभन्दा लामो र सबभन्दा छोटो
एउटा भजन बाइबलकै सबभन्दा लामो अध्यायको रूपमा रहेको छ भने अर्को भजन सबभन्दा छोटो अध्यायको रूपमा रहेको छ। भजनसङ्ग्रह ११०-१२० लाई सरसरती हेर्नुहोस्। कुनचाहिँ भजन सबभन्दा छोटो छ? _____________। कुनचाहिँ भजन सबभन्दा लामो छ? _____________। यो सबभन्दा लामो भजनको झण्डै प्रत्येक पदमै परमेश्वरको वचनको उल्लेख छ! साथै परमेश्वरको नाउँसमेत झण्डै प्रत्येक पदमै उल्लेख छ! यो लामो भजन लेख्ने व्यक्तिलाई निश्चय नै परमेश्वर र उहाँको वचन ज्यादै महत्त्वपूर्ण लाग्थ्यो! (टिप्पणी: कतिपय मानिसका विचारमा भजनसङ्ग्रह ११९ का लेखक एज्रा थिए भन्ने छ)।
विभिन्न प्रकारका भजनहरू
भजनहरू विभिन्न प्रकारका छन्। तीमध्ये केही प्रकारको विषयमा विचार गरौं:
हिब्रू वर्णमालामा २२ ओटा वर्णहरू छन्। वर्णाक्रमिक भजनमा पहिलो पद वर्णमालाको पहिलो वर्णबाट शुरु हुन्छ अनि दोस्रो पद दोस्रो वर्णबाट शुरु हुन्छ अनि यसरी नै क्रमैसित अगाडि बढ्दै अन्तिम पद आखिरी वर्णबाट शुरु हुन्छ। नेपालीमा वर्णाक्रमिक भजन लेख्ने हो भने हामीले "क" बाट पहिलो पङ्‍‍‍क्ति, "ख" बाट दोस्रो पङ्‍‍‍क्ति, गर्दै क्रमशः अन्तमा "_____" बाट कविताको अन्तिम पङ्‍‍‍क्ति रच्नुपर्ने हुन्छ।
सबभन्दा प्रख्यात वर्णाक्रमिक भजन भजनसङ्ग्रह ११९ हो (कुनै-कुनै बाइबलहरूमा प्रत्येक खण्डको शिरमा सम्बन्धित हिब्रू वर्णसमेत छापिइएको पाइन्छ)। भजनसङ्ग्रहमध्येमा यो सबभन्दा लामो हो जसमा ८-८ पदहरू भएका २२ ओटा खण्डहरू छन्। प्रत्येक खण्डका प्रत्येक ८ पदहरू उही हिब्रू वर्णबाट शुरु हुन्छ। योचाहिँ केवल हिब्रू बाइबलमा मात्र देख्न सकिन्छ।
"हल्लेलुयाह" एउटा हिब्रू शब्द हो जसको अर्थ हो "परमप्रभुको प्रशंसा गर"। प्रत्येक हल्लेलुयाह भजन "हल्लेलुयाह" मा अन्त हुन्छ। बाइबलको सबभन्दा छोटो भजन (भजनसङ्ग्रह ११७) एक हल्लेलुयाह भजन हो। तपाईँले अरू पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ कि?
भजनसङ्ग्रह १३६ लाई किन धन्यवादको भजन भनिन्छ (प्रथम र अन्तिम पदहरूलाई ध्यान दिनुहोस्)? प्रत्येक पदमा के दोहोर्‍याइएको छ? ___________________________
भजनसङ्ग्रह १५० (मात्र ६ ओटा पदहरू) मा "प्रशंसा" भन्ने शब्द कतिपटक भेटिन्छ? _____________
कतिपय भजनले हामीलाई विगतका इतिहासका कुरा सिकाउँछन् जसमा आफ्ना जनहरूका निम्ति परमेश्वरले गर्नुभएका महान् कार्यहरूको सम्झना गरिएको भेटिन्छ। भजनसङ्ग्रह १०५ मा इतिहासका के कस्ता महान् घटनाहरू उल्लेख भएका छन्? _______________________________ ____________________________________________________
"पश्चात्ताप" को अर्थ हो "गल्ती गरेकोमा दुःखित हुनु र पाप स्वीकार गरी परमेश्वरमा फर्की गल्तीलाई सच्याउन राजी हुनु"। कतिपय भजन परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका मानिसका प्रार्थना हुन्। जस्तै, भजनसङ्ग्रह ५१ आफू ठूलो पापमा फसेपछि दाऊदले गरेको प्रार्थना हो। कुन पद (वा पदहरू) ले दाऊदले आफ्नो पाप स्वीकार गरेको देखाउँछ? __________________। हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर यी भजनहरूले हामीलाई सिकाउँछन्।
सरापको अर्थ हो "कसैमाथि खराबी आओस् भनी प्रार्थना गर्नु"। कुनै-कुनै भजनले हामीलाई पापीका विरुद्धमा रहेको परमेश्वरको पवित्र क्रोधको र दुष्टलाई उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ र नष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको सम्झना गराउँछन्। यीमध्ये एउटा हो भजनसङ्ग्रह ५८। हेर्नुहोस्, दुष्टहरूलाई उल्लेख गर्दा र उनीहरूलाई उनीहरूको पापको कारण कस्तो कारवाही गर्नुभएको होस् भनी प्रार्थना गर्दा दाऊदले कति कडा शब्द प्रयोग गरेका छन्।
यी हुन् मसीह, प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउने भजनहरू। भजनहरूले उहाँका विषयमा बताउँछन् भनी येशू आफैले भन्नुभएको थियो (हेर्नू: लूका २४:४४ - "___________का पुस्तकहरूमा मेरो विषयमा जे लेखिएका थिए")। हामीले ख्रीष्टलाई भेट्टाउने प्रतीक्षा गर्दै भजनहरूलाई पढ्नुपर्दछ।
सबभन्दा अचम्मका मसीही भजनहरूमध्ये एउटा हो भजनसङ्ग्रह २२ (जसलाई क्रूसको भजन भनेर पनि चिनिन्छ)। यो भजनमा क्रूसको मृत्युको अचम्मकै वर्णन पाइन्छ। रोमी सिपाहीहरूले ख्रीष्टका हात र पाउलाई छेडेका कुराको उल्लेख गर्ने पद भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? पद ________। पद १ मा ख्रीष्टले क्रूसबाट उच्चारण गर्नुभएका शब्दहरू नै पाउँदछौं (हेर्नू: मत्ती २७:४६)। क्रूसको फेदीमा मानिसहरूले ख्रीष्टलाई गिल्ला गरेका र खिसी गरेका कुरा उल्लेख गरेका पदहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? ______________। रोमी सिपाहीहरूले ख्रीष्टका वस्त्रलाई के गरे भनी के पद १८ ले तपाईंलाई याद गराउँछ? क्रूसको पीडा, कष्ट र नग्नताको उल्लेख गर्ने पदहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? ________________
त्यहाँ अरू मसीही भजनहरू छन् जसले ख्रीष्टको बौरिउठाइ र राजाको रूपमा हुने उहाँको दोस्रो आगमनको चर्चा गर्दछन्।
भजनसङ्ग्रह हृदयको पुस्तक हो। भजनसङ्ग्रह ६२:८ मा भजनको लेखकले हामीलाई "_________को सामुन्ने आफ्ना ___________ खोल" (हिब्रूमा "खोल" = पोखाओ") भनी आग्रह गर्दछन्। दाऊद र अन्य लेखकहरूले भजनसङ्ग्रहमा यस्तै गरेको हामी पाउँछौं। यी मानिसहरू परमेश्वरका सामु एकदम खुल्ला थिए। दुःखित हुँदा होस् वा निराश हुँदा होस् वा उनीहरूलाई डर लाग्दा उनीहरू आफ्ना मनका भावना परमेश्वरलाई व्यक्त गर्थे। ४२:५-६ मा भजन लेखकको भावना कस्तो थियो? ____________________________________। खुशी वा आनन्दित हुँदा भजन लेखकले आफ्नो भावना परमेश्वर लगायत सबैलाई थाहा दिए। पाप गरेपछि दाऊदले आफ्नो हृदय परमेश्वरलाई पोखाए अनि मन खोलेर आफूले गरेका पाप स्वीकार गरे (भजनसङ्ग्रह ५१:३-४)। भजनसङ्ग्रहमा हामी मानिसहरूको भित्री हृदयदेखिको उद्‍गारहरू पढ्छौं। दुःखमा वा शोकमा वा ठूलो आनन्द र रमाहटको घडीमा, भजनसङ्ग्रहमा परमेश्वरका जनहरूले आफ्ना हृदयहरू उहाँका सामु पोखाइरहेका देख्छौं।
आज परमेश्वर आफ्ना जनहरूले यस्तै गरेको चाहनुहुन्छ। हामी परमेश्वरका सामु एकदम खुल्ला भएको चाहनुहुन्छ। हामीले प्रार्थना गर्दा हाम्रो विचार र भावना जे छ त्यही परमेश्वरलाई बताउनुपर्छ। हाम्रा विचार र भावना परमेश्वरलाई अगाडिबाटै थाहा छ तरैपनि यी कुराहरूमा हामी खुल्ला भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। के हामी परमेश्वरलाई कहिल्यै झुक्क्याउन सक्छौं (भजनसङ्ग्रह १३९ को पहिलो भागलाई हेर्नुहोस्)? हामी दुःखित छौं वा आफूलाई एकलो महसुस गर्दैछौं वा भयभीत छौं वा चिन्तित छौं भने ठीक यही कुराहरूको विषयमा हामीले उहाँसित कुरा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। के तपाईं प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ? के तपाईं आफ्नो हृदयलाई उहाँको सामु पोखाउनुहुन्छ? के तपाईं आफ्नो विचार र भावनाको बारेमा परमेश्वरसित कुरा गर्नुहुन्छ? के तपाईं परमेश्वरको सामु खुल्ला हुनुहुन्छ? के तपाईं आफ्नो स्वर उचाली परमेश्वरको निम्ति गाउनुहुन्छ? तपाईंको स्वर कस्तो सुनिन्छ त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, तपाईंले आफ्नो हृदयमा भएको कुरालाई आफ्ना ओठहरूबाट प्रार्थना, धन्यवाद र प्रशंसामा पोखाउनु। हामी भजनसङ्ग्रह जति धेरै पढ्नेछौं त्यति नै धेरै हामी हृदयदेखि प्रार्थना गर्न, उपासना गर्न, स्तुति गाउन र प्रशंसा गर्न सिक्नेछौं!